La Ogaaday: Muxuu Ole Gunnar Solskjaer Ciyaartoyda Kooxdiisa Man United U Sheegay Kadib Ceebtii Cardiff City? - Gool24.Net
La Ogaaday: Muxuu Ole Gunnar Solskjaer Ciyaartoyda Kooxdiisa Man United U Sheegay Kadib Ceebtii Cardiff City?
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa kadib guuldaradii Cardiff City waxa uu cadho kula dhacay ciyaartoyda kooxdiisa.
Waxaa hadda la ogaaday waxyaabihii uu Ole Gunnar Solskjaer qolka labiska Old Trafford uu ugu sheegay ciyaartoyda fashilmay ee kooxdiisa.
Axadii kooxda heerka labaad u dhacday ee Cardiff City ayaa guuldaro 2-0 ah United ku baday Old Trafford taas oo uu Solskjaer ceeb ku sifeeyay waxayna ahayd bahdilaadii ugu danbaysay ee xili ciyaareedka.
Laakiin wargayska The Sun ayaa hadda shaaciyay in Ole Gunnar Solskjaer uu ciyaartoyda kooxdiisa qolka labiska ku jeex-jeexay isla markaana uu ugu hanjabay in uu kala badhkooda kooxda ka caydhin doono.
Waxa uu Ole Gunnar Solskjaer ciyaartoyda kooxdiisa ku eedeeyay maskaxda liidatay ee ay kulankii Cardiff City kala soo muuqdeen iyo sida ay ceeb ugu horseedeen kooxda iyo jamaahiirtooda.
Waxa kale oo la sheegay in Solskjaer uu ciyaartoyda kooxdiisa u ugu hanbay in haddii ay Man City ku fashilanto koobka FA Cupka in ayna heli doonin wax fasax ah oo ay xagaaga ku maqnaan karaan maadaama oo ay isreeb reeb u soo gali doonaan Europa League.
Manchester United ayaa markale si lama filaan ah Man City ugu taageeraysa in ay Watford ka qaato koobka FA Cupka iyada oo sababtu tahay in Watford ay Europa League si toos ah ugu soo bixi doonto haddii ay FA Cupka ku guulaysato.
Haddii ay Man City ku fashilanto koobka FA Cupka waxay ciqaab ku abuuri doontaa Man United oo isla bisha July bilaaban doonta kulamada isreeb reebka Europa League loogu soo baxayo taas oo uu Ole Gunnar Solskjaer ku canaantay ciyaartoyda kooxdiisa.
Man United ayaa kalsali doonta kulamadii xili ciyaareedka ka horeeyay ee saaxiibtinimo haddii ay Man City guul ka gaadhi kari waydo Watford ee finalka FA Cupka taas oo musiibo kale ku noqon doonta Red Devils.
Si kastaba ha ahaatee, Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaartoyda kooxdiisa ugu han jabay in uu kala badhkooda ka diri doono Man United taas oo galaafan doonta xidigo badan oo xaalad xun ku soo jiray.